RFID Card, smart Tag, CPU Card, RFID inlay, RFID Animal Tag, Identification, Njikwa Nchebe Smart, AIDC, E-tiketi, Akwụkwọ mmado, RFID Label, Anti-metal Tag, NFC Wristband, Mgbaaka RFID, Eriri Ngakọ Igodo, Reader LF / HF / UHF, Access Control, Oge abịa, Ngwaọrụ njirimara akara aka
WHO na anyị na-
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa nke RFID ngwaahịa na Shenzhen, anyị na ngwaahịa na-agụnye niile RFID kaadị, kpọọ, inlay, mmado, ngwaike, tinyere ohere akara ịgụ na ide akụrụngwa mmepụta development, software mmepe na RFID ngwa oru ngo ngwọta.
Ọ bụla ahịa bụ ihe pụrụ iche, ọnọdụ ọ bụla bụ dị iche iche. Omume na-atụgharị SeabreezeRFID n'ihi na nza nke ihe. ma, ọtụtụ mgbe, ọ distills ala a otu okwu: Trust. Trust anyị ngwaahịa na ngwọta, Trust anyị pụta. Ahọpụta SeabreezeRFID ka so na gị otu na a ntinye aka azụmahịa gị ịga nke ọma bụ a ịrịba votu nke obi ike. Anyị ga-enwe obi ụtọ itinye anyị na ngwaahịa, ngwọta na-arụpụta na n'ihi gị na-amalite na iji nweta gị obi.
Anyị isi ọrụ
SeabreezeRFID awade ahụmahụ na mbara enyemaka maka a dịgasị iche iche nke RFID & IoT azụmahịa mkpa, ma ọ bụghị naanị RFID mbụ ngwaahịa na oru ngo ngwa ngwọta, karịsịa elu uru-kwukwara ngwaahịa na-akwalite azụmahịa gị ịzụlite ngwa ngwa na iru ihe mgbaru ọsọ gị.
anyị na-akwado: magburu onwe ya mma, price uru, zuru okè ọrụ, n'oge nnyefe ụkpụrụ, aka ahịa na ọgwụgwụ ọrụ, banye n'ime ahịa, akwalite ngwaahịa, nwere ike n'ụzọ zuru ezu OEM & ODM, iwepu-echegbu gị. Nwere a lee anya na ọkachamara ọrụ SeabreezeRFID rịọ, na ka okwu.
Anyị na-kwara Manufacturing RFID & IoT Products N'ihi na gị na Business!
SeabreezeRFID LTD nwere zuru mmepụta edoghi nke Radio Frequency Identification, anyị ngwaahịa nwere a dịgasị iche iche nke ibe site ala ugboro, elu ugboro na ultra-elu ugboro. Nwere ike na-enye ahaziri ọrụ izute gị nanị echiche na mkpa.
RFID klaam Shell Card, EM4102 klaam Shell Card, T5577 klaam Shell Card, Access Control okpokoro akịrịkọ Card
Inkjet Printer Direct Print ịkwanyere White Card, Printable Magnetik warara kaadị, Printable RFID Mgbawa oghere Card
J3H081 Mgbawa Dual Interface CPU Card, Mbụ NXP J3H081 Chip Dual Interface CPU Card
RFID Concrete Quality Management Tag, RFID Cement Ndepụta Management Tag
kasị 424 DNA na-egbochi mgbochi mpempe akwụkwọ mkpuchi nzuzo, kasị 424 TT Tamper Gosiri mgbochi-ezu ohi ezo Label
T5577 Hotel Eriri Ngakọ Igodo, T5577 Access Control Eriri Ngakọ Igodo, T5557 Hotel Key Ring, T5567 Access Control Key Fobs
Handheld Long Anya Animal ID Tag Reader, 134.2kHz, ISO11784 / 11785, FDX-B
RFID Agba Soft Silicone Mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe, NFC Agba Soft Silicone Mgbaaka Mgbanwe
Otu oge Tapawa Okwu Park Waterproof Identification Wristband, Mgbaaka ama ama ama egwuregwu ụlọ adịghị mma enwere ike ịtụfu
Kaadị igwe elekere igwe anaghị eji eme ihe, Kaadị ihe nchekwa aha PVC ihe eji eme ihe, Emebe Igwe Ọdụdọ Iron IC
Laser Holographic Mpempe Eserese Eletriki Laser, Kaadị rọba nke Laser, Laser Holographic Eserese Eletriki
1. RFID Agba Soft Silicone Mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe
The ahịa na-enye HF / UHF poolu imewe ịbịaru, faịlụ format Ụgbọala CAD (.dwg), anyị kwuru na 24 awa, na e kwuru efu agụnye efere Ndinam-efu na ngwaahịa kwuru, egosi teknuzu nkọwa, mgbe ịbanye nkwekọrịta, anyị ga-enye na poolu layout n'ime 24 awa – ahịa egosi – Ahịa Chọpụtakwa efere okirikiri nhọrọ ukwuu na-akwụ efere ego – anyị na-eme ndokwa mmepụta plan – Efere Ndinam na sample mmepụta – Nye 20 ~ 400pcs free samples ka ndị ahịa na nkwenye.
RFID Agba Soft Silicone Mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe.
» N'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka mkpado RFID ga-ada ?
» RFID mmadụ etinyere Bio-glass Tube Tag Ngwa na atụmanya mmepe